ရန်ပိုင်| January 25, 2013 | Hits:4,776
shingran brang January 25, 2013 - 10:18 pm အစိုးရ လျှို့ဝှက် အကြံအစည် နဲ့ ကွဲလွဲနေလို့ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
Reply မြန်မာ တိုင်းရင်းသူ January 26, 2013 - 3:34 am နောက်တန်းမှာ နွေးနွေးထွေးထွေး လုံခြုံစွာနေပြီး တိုက်မိန့်ပေးနေတဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေပါ အရှေ့တန်းမှာ သွားနေသင့်တယ်။
Reply AunG January 26, 2013 - 7:13 am Why burmy army stop their way…? i suspect burma army generals/leaders don’t want Really Peace for Burma.
Reply mm January 26, 2013 - 8:03 am aww
Reply ကချင်မြေ January 26, 2013 - 11:07 am ရဲဘော်နေမျိုးဇင် လုပ်ရပ်ကို လေးစားပါတယ်။ ဆက်လုပ်ပါ ပြည်သူ့ ဗိုလ်ကြီးရေ
Reply Shwe Hinthar January 28, 2013 - 5:38 pm So, the Myanmarese junta does not want to see peace. Right? If people cannot express what they believe, why do they still talk about democracy then? Is the junta joking?